"Makore Mazana Ekusurukirwa" naGG Márquez pakati pemabhuku akaverengwa zvakanyanya | Zvazvino Zvinyorwa
"Makore Mazana Ekusurukirwa" naGG Márquez pakati pemabhuku akaverengwa
Kana tikataura pasina kusiyana izvozvo Gabriel García Márquez Iye ndiye anonyanya kuverengerwa munyori wechiLatin America wenguva dzese, hatisi "kutya" zvakanyanya kukanganisa. Akanyora mabhuku asingaverengeke uye nderipi riri nani, asi bhuku raakaverenga zvakanyanya hapana mubvunzo "Makore Mazana Ekusurukirwa", yakabudiswa muna 1967.
"Makore Mazana Ekusurukirwa" ndiyo chiratidzo chiratidzo che tiguu uye hunyanzvi hwe mashiripiti echokwadi. Inotaurira nyaya yezvizvarwa zvinomwe zvemhuri yakatambudzwa nenjodzi inouraya, iyo inofananidzira muchidimbu shanduko yezvematongerwo enyika nekondinendi.
1 Zvinyorwa zvebhuku
1.1 Iyo nheyo yeMacondo
2 Mimwe mitsara yekunyepedzera ye "Makore Mazana Ekusurukirwa"
"Makore Mazana Ekusurukirwa" inomiririra kuzviparadzanisa nekushushikana kwemunhu musaga yeBuendía uye chokwadi cheAmerica munzvimbo yenhema yeMacondo. Nenzvimbo inopfachukira yekurondedzera, GG Márquez iri munguva inotenderera umo zvinoitika zvezuva nezuva nezvinoshamisa.
Iyo nheyo yeMacondo
José Arcadio Buendía na Úrsula Iguarán vanoroora kunyangwe vari hama dzemurume. Vanobva kuRiohacha ndokuwana guta raizivikanwa saMacondo.
Guta rinotambura nehondo dzakasiyana siyana, shanduko yehurumende mune zvematongerwo enyika zvemukati uye shanduko dzinokanganisa hupenyu hwemhuri. Macondo, saka, inorega kuve inzvimbo yekufungidzira kuti ive nzvimbo ine maindasitiri.
Vaviri vekupedzisira mune sage yeBuendía, Aureliano Babilonia natete vake Amaranta Úrsula, baba mwana ane muswe wenguruve. Kupera kwetambo kuri kuswedera, sezvo amai vachizofa mushure mekusununguka uye mwana achadyiwa nemasvosve. Aureliano Babilonia anobva averenga mipumburu uko gypsy Melquíades, hunhu hunowanikwa pakutanga kwenoverengeka, akange anyora nhoroondo yemhuri yake makore zana pasati pasvika.
Mimwe mitsara yekunyepedzera ye "Makore Mazana Ekusurukirwa"
"Chinhu chakakosha hachisi chekurasa maitiro."
"Ini handina kunzwisisa kuti ndoita sei kune yakanyanyisa yekuita hondo pamusoro pezvinhu zvisingagone kubatwa nemaoko."
"Ini, ini pachangu, ikozvino ndatoona kuti ndiri kurwira kudada."
Kashoma sei varume. Vanopedza hupenyu hwavo vachirwisa vapristi uye vachipa mabhuku eminamato.
"Chakavanzika chekukwegura kwakanaka hachisi chinhu chinopfuura chibvumirano chekutendeseka nekusurukirwa."
"Kuchema kwekare munhoroondo yevanhu ndiko kuchema kwerudo."
"Haufe paunofanirwa, asi paunokwanisa."
"Nekuedza kumuita kuti amude, akapedzisira amuda."
"Kuchembera kwekuchembera kunogona kuve kwakaringana kupfuura kubvunzwa kwedheka."
"Akarasika ari ega simba rake rakakura, akatanga kurasikirwa nenzira yake."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » "Makore Mazana Ekusurukirwa" naGG Márquez pakati pemabhuku akaverengwa
Nguva dzose Don Juan Tenorio, yakakosha klassiki yemisi iyi